Cajiib ah Mag
Fikrado soo jeedina
Yaa I Bar Kara IT?
Faa'iidooyinka Qolka Keydinta Aluminium
Wax walba oo ku saabsan gaadiidka hantida
Astaamaha Isugeynta Wixii La Taaban Karo
Mawduucyada Muhiimka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ee Dunida
Top 10 Soojiidasho Cajiib Ah Oo Ka Dhacay Gudaha iyo Hareeraha Thekaddy
Kerala waa himilada riyada qof kastoo dabeecad jecel. In kasta oo gadaal dhagaxa crystalline-ka ah ay bixiyaan fursad dahabi ah oo waqti tayo leh kula qaadanayaan kuwa aad jeceshahay, udgoonka udgoon ee hawadu waxay dib u cusbooneysiisaa naftaada. Doogga cagaaran ee hareeraha ku wareegsan oo dhan waa daaweyn…
Socdaalka Dunida: 11 Neefsashada Waa In La-Yaabaa La Yaab Yaab Leh
Waxaa jira goobo badan oo kala duwan oo adduunka ah oo mudan in la booqdo. Laakiin dhammaantood waxay kuxiranyihiin nooca sahaminta aad tahay. Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay arkaan magaalooyin cusub oo adduunka ka mid ah oo ay sahamiyaan dhaqamo kala duwan, kuwa kalena waxay ku raaxaystaan ​​on
Maxay Kooxda Qareenadu ugu baahan yihiin inay si joogto ah u sameeyaan Maxkamadeynta Jees -jees?
Goobaha waxbarashada, tijaabooyinka jees jeeska waxaa loogu talagalay in lagu baro ardayda sharciga si ay u bartaan khibradaha qolka maxkamadda. Dhammaan faahfaahinta iyo dabinnada waa in lagu daraa si loo hubiyo inay u muuqdaan kuwo dhab ah. Iyada oo loo marayo tijaabooyin jees jees ah, qareennada xirfadleyda ah ayaa fahmi kara waxyaabaha ku fiican iyo daciifnimada…
Isbeddellada Farsamada ugu Sarreysa ee lagu maamulayo sanadka 2018
Hal-abuurrada cajiibka ah ee ay ku jiraan farsamada aqoonsiga wajiga ee Apple's iPhone X ayaa ahaa mid ka mid ah isbeddellada naqshadaynta app ee ugu cajiibsan sannadkii hore. In kasta oo isbeddellada tignoolajiyadu ay badbaadaan muddo gaaban, aqoonsiga wejigu wuxuu u hoggaansami doonaa warshadaha app-ka ee…
Falanqaynta Qoto dheer ee dhammaan noocyada dufanka
Mar kasta oo aad maqasho wax lagu sameeyo "dufan", had iyo jeer waa xumaan. Halka ay run tahay in dufanka badani aanay kuu fiicnayn laakiin dufanka ayaa weli jidhku u baahan yahay. Wax badan kama maqasho, laakiin jidhkaagu wuxuu u baahan yahay baruur...
7ka Shabakadood ee ugu Faaiidada Badan U Socdaalka Boqortooyada Ingiriiska
Boqortooyada Midowday waxaa loogu yeeraa Wadan Weyn oo aan micne lahayn - waa isku darka afar dal oo isku jira. Royal England iyo indhaheeda, qalcadaha dhexe iyo dhismayaasha Wales, quruxda murugsan ee buuraha iyo harooyinka Scotland, tuulooyinka qadiimiga ah…
6 Khaladaadka Naqshadaynta Shabakadda Mar dambe ma awoodo
Waxaad abuurtay degel muuqaal cajiib ah laakiin ku guul daraystay inaad ka qayb qaadato isticmaalayaasha ama isticmaalayaasha cabashada ku saabsan hagidda. Waxay u badan tahay inay jiraan khaladaad naqshadeyn shabakadeed oo yar. Si la mid ah, mareegaha ayaa faa'iido leh oo sahlan in la isticmaalo, laakiin inta badan isticmaalayaasha waxay u maleynayaan ...
Suuqgeynta Maaddada vs Dhismaha Linkiga
Waxaa jira baloogyo badan iyo shirkado SEO ah kuwaas oo dhamaantood sheegaya waxyaabo kala duwan si loo galo bogga koowaad ee Google. 12-kii bilood ee la soo dhaafay waxaan tijaabinay dhammaan aragtiyahaas. Waxaan sariirta gelin doonaa dhammaan fikradahan SEO-ga…
Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah ee 2017 ee Xirfadlayaasha Guryaha iyo Ganacsatada
2016 ayaa hoos u dhacaya, taas oo macnaheedu yahay inta badan xirfadlayaasha iyo ganacsatadu waxay horayba u sii wadi jireen marka ay timaado qorsheynta suuq-geynta dhijitaalka ah sanadka soo socda. Waxay u qaabaynaysaa inuu noqdo sannad xiiso leh oo dhan warshado badan markaan u soconno 2017, lagana yaabo…
10 Isbeddellada Naqshadaynta Sawirrada Si loo ruxdo 2017 iyo wixii ka dambeeya
Isbeddellada ayaa soo ifbaxaya, dareenka soo jiidanaya, weynaanaya ka dib muddo gaaban ama dheer oo soconaysa dhawr bilood ilaa sannado ka dib way ka baaba'aan goobta. Marka ay timaado naqshadeynta garaafyada waxaan aragnay isbeddello aad u badan oo soo muuqda dhowr sano gudahood…
Waxaad tagtay baarka isboortiga. Xitaa waxaad xitaa tagi kartaa baraf. Laakiin miyaad ku dhiirratay mawjadaha hoostooda inaad ku cabto baraf ku hoos jira gebi ahaanba biyaha hoostooda? Ka waran musqusha dadweynihii hore u ahaan jiray qolka is biirsaday? Hadaad jeceshahay…
Shaqaalaynta Pearson Airport Limos - Faa'iidooyinka Qaar
Waa maxay falcelintaada bilowga ah markii aad aragto limousine? Mid ka mid ah falcelintaada ayaa laga yaabaa inay tahay cabsi maxaa yeelay ma noqon karto mid ku badan aaggaaga. Dadka qaarkiis waxay qabaan fikradda ah in kuwa caanka ah kaliya ay fuuli karaan limousines laakiin…
6 Aaladaha Android ee Hormariyaha kasta Waa inuu Ka Ogaadaa
Waa maxay sababta Android OS ay tahay doorashada ugu doorbidayaasha horumariyaasha? Android waxay wax ka dhigtaa wax fudud oo waa nidaam hawlgal mobiil oo aad loo miisaami karo oo sidoo kale aad u saaxiibtinimo leh. Soo bandhigida aalado badan ayaa u fududeeyay soosaarayaasha barnaamijka Android inay abuuraan hal abuur…
Sida Loogu Fuulo Fasalka Koowaad Qiimo Dhimis
Socdaalka fasalka koowaad waa raaxo aan dad badani awoodin, laakiin haddii aad duul dheer ku jirto ka hor, kharashka dheeraadka ah ee aad ku bixinayso fasalka koowaad ama ganacsiga ayaa safarkaaga ka dhigi kara mid raaxo leh. Haddii aad tikidhadaada ka goosatid khadka tooska ah, inta badan ma sameyn doontid…
Qaabka Madadaalada Ee Malayalees In USA
by Qaansada Sct
Malayalam waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah luqadaha waaweyn ee Hindiya. In kasta oo Malayalam ay u badan tahay luuqadda gobolka Kerala ee Hindiya, laakiin waxaa si ballaaran looga isticmaalaa gobollada kale sida Tamil Nadu iyo Karnataka. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, ku dhowaad 38 milyan oo qof oo Hindi ah…
5 Waxyaabood Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Kahor Intaadan Ku Biirin Akadamiyada Muusiga
Dugsiga muusiggu waa madal gabi ahaanba muhiim u ah dhammaan muusikiistayaasha rajada leh, ee doonaya inay qaabeeyaan xirfadahooda iyagoo qayb ka ah jawi gacan ka geysanaya soo saarista muusikiisteyaal aad u tiro badan. Dadka qaar ayaa ku doodaya, haddii aad runtii karti kuu leedahay…
Sida Loo Caawiyo Kushiinkaaga inuu ku guuleysto isku dheelitirnaan ka wanaagsan nolosha-nolosha
Ahaanshaha cunto kariye sare ee makhaayad caan ah waxay ka dhigan tahay run ahaantii mid gaar ah oo lagu ixtiraamo warshadaha martigelinta. Cunto kariyuhu wuu samayn karaa ama jebin karaa makhaayad. Waan ogahay makhaayad leh muusig toos ah oo aniga agtayda ah halkaasoo muusiggu ahaa mid kadis ah laakiin the
Safar ugu tag Delhi si aad u sahamiso sidii hore oo kale
New Delhi waa magaalo dhiirrigelisa oo soo jiidasho leh si kastaba ha ahaatee waxay sidoo kale u noqon kartaa mid aad u culus dadka u socda si naxdin leh oo aan wax badan ka ogeyn waxa magaalada laga sameeyo. Maqaalkani kuu sheegi maayo sababaha loogu hanqal taagayo magaalada…
Asia/Hagaha Safarka/Faallooyinka Safarka
Waxyaabo Xiiso Leh Oo Lagu Qabto Dubai
U bixi dalxiis magaalada Dubai, oo ah halka ugu xiisaha badan ee laga raadsado ka dib meeraha meeraha oo aad la kulanto dhammaan waxyaabaha xiisaha leh ee magaaladu miiska soo saarto. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa malaha waxyaabaha ugu qabow iyo xiisaha badan ee aad sameyn kartid intaad while
Sida Loo Badbaadiyo Inbadan Wadadaada Xiga ee LA
Joogitaanka feejignaanta ee safarka wadada way adkaan kartaa, laakiin waa macquul haddii aad horay u sii qorsheyso oo aad ku adkeysato qorshayaashaada. Qorsheynta safar aad ku tageyso Los Angeles waxay kugu noqon kartaa wax aad u badan waxbadan oo aad aragto oo aad sameyso, marka waa fikrad fiican inaad bixiso give
Dhibaatooyinka Hurdada ee Caadiga ah ee ay la kulmaan Carruurtu iyo Sida Loo Xaliyo
Ilmahaagu miyuu mar kale la kulmaa dhibaatooyin hurdo? Ku guuldareysiga in si wax ku ool ah wax looga qabto dhibaatada waxay adiga iyo ilmahaaga u noqon kartaa qarow nololeed. Daraasado badan ayaa muujinaya in carruurta leh caadooyin hurdo oo aan habboonayn ay u badan tahay inay la kulmaan koboca jir ahaaneed iyo kartida wax -barashada. The weyn…
Waxaa jira kuwa rumaysan in noloshu halkaan ka bilaabatay… adduun weynaha oo dhan, qabiilooyinka aadanaha oo laga yaabo inay awoowe u ahaayeen Masaarida ama Toltec ama Mayans. Qaarkood waxay aaminsan yihiin inay jiri karaan walaalo aadanaha oo xitaa hadda u dagaallama inay ku noolaadaan meel ka baxsan cirka.
Dhacdooyinka iyo Abaalmarinta15
Fariintan qalad ah waxaa kaliya arki kara maamulayaasha WordPress
Khalad: Wax quudin ah lama helin
Fadlan tag bogga dejinta quudinta Instagram si aad u abuurto quudin.